Sheekada filimka Yamla Pagla Deewana Phir Se: Reer Deol ma bad baadin karaan filimkan fariintiisa liidato! – Filimside.net
Sheekada filimka Yamla Pagla Deewana Phir Se: Reer Deol ma bad baadin karaan filimkan fariintiisa liidato!
August 31, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 31, 2018
Dharmendra iyo labadiisa wiil Sunny Deol iyo Bobby Deol wada shaqeyntooda kowaad waxay ka bilaabeen filimkii dadka wada qiiro galiyay aadna looga hela sheekadiisa ganacsi ahaana guuleestay APNE . Waxaa dhacday shan sano kadib inay la imaadeen filimkiii shactirada waalida ah xambaarsanaa YAMLA PAGLA DEEWANA  kaasi oo HIT weyn noqday.
Reer Deol waxay u bogeen taxahana shactirada badan waxayna la imaadeen qaybtiisii labaad YAMLA PAGLA DEEWANA 2  labo sano kadib laakiin nasiib daro daawadayaasha wey iska diideen filimkan oo sheekadiisa aad u liidatay dhan walbo. Haatana si geesinimo ku dheehan qayb sedexaad ayay la imaadeen shan sano kadib ayagoo og in taxahana qaybtiisii labaad lagu fashilmay waxaana maanta masraxa loo saaray YAMLA PAGLA DEEWANA PHIR SE!
Jilaayaasha YPD Phir Se: Dharmendra, Bobby Deol, Sunny Deol iyo Kriti Kharbanda
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 28-daqiiqo
Qiimeynta fariinta filimkan: 2.5/5 (Labo xidig iyo bar)
Muxuu Ku Wanaagsan YPD Phir Se: Bandhiga Sunny iyo Dharam, Action-mada qaar oo la daawan karo, wax yar oo mada daalo ah iyo is fahanka reer Deol ka dhaxeeyo.
Muxuu Ku Liitaa YPD Phir Se: Sheekadiisa oo aan isku xir dhameestiran laheyn, shactiradiisa oo aan heer sare ahayn iyo dhacdooyin aan maan gal ahayn waa filim la iska sameeyay taxadir la’aan.
Fariinta Filimka YPD Phir Se Oo Kooban: Filimkan wuxuu ka hadlaa hal nin sida uu ula dagaalamo musuq maasuqa ka jiro rugta daawooyinka lagu iibiyo ee farmashiyaasha. Puran (Sunny Deol) waa qabiir daawooyinka kala yaqaano kana shaqeeyo xarun caafimaad oo Amritsar ku taalo wuxuuna dadka ku daaweeyee daawo dhireed qadiimi ah oo uu ka dhaxlay istimaalkeeda awoowayaashiisa.
Marfatia (Mohan Kapur) ayaa isku dayaayo inuu gacanta ku dhigo daawada uu Puran (Sunny Deol) dadka ku daawo wuxuuna usoo adeegsana walaalkiis ka yar Kaala (Bobby Deol) oo wax walbo lacagta ka hormariyo waxaana loo balan qaadaa 1 Crore haddii uu walaalkiis ka dhaadhiciyo inay isla shaqeeyaan.
Puran (Sunny Deol) dalabkii wuu diidaa kadibna waxay dhibaato kaga imaanee Marfatia (Mohan Kapur) iyo ragg uu soo kireestay dhamaantooda si xun ayuu u garacaayaa wuxuuna Marfatia (Mohan Kapur) wacad ku maraa inuu ka aar guto Puran (Sunny Deol).
Dhinaca kale Chikoo (Kriti Kharbanda) oo ah gabbar reer Gujarat waxay imaanee Punjab gaar ahaan Amritsar waana ardayad qaliinka baratay oo rabto inay Puran (Sunny Deol) la shaqeyso waxna ka faa’iideesato aqoontiisa. Kadibna waxaa dhaceyso in Kaala (Bobby Deol) uu jeclaanayo gabadha gobolkiisa martida ku ah Chikoo (Kriti Kharbanda).
Dhinaca kale Puran (Sunny Deol) dhibaato dhanka sharciga ah ayuu la kulmaa madaama tuugii Marfatia (Mohan Kapur) uu ka xadaayo sirta uu wax ku daaweeyo kadib maxkamad ayaa lasoo taagayaa Puran (Sunny Deol) asigoo lagu eedeenayo daawo uusan soo saarkeeda laheyn adeegsado.
Puran (Sunny Deol) oo dhiban waxaa garab siinayo abuukataha gurigiisa kirada ku dagan laakiin qamriga iyo hablaha la saaxiibka ah Parmar (Dharmendra). Inkastoo Puran (Sunny Deol) uusan jecleyn Parmar (Dharmendra) haddana caawinaad fiican ayuu ka helayaa.
Filimka YPD Phir Se qeybihiisa dambe waxaa loo daawan doonaa sida Sunny Deol dhibka heesto kaga baxaayo, Bobby gabadha uu jecel yahay sida uu ku heli karo iyo arimo kale oo dhib badan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka YPD Phir Se: Dheeraj Rattan oo sheekada filimkan qoray wuxuu la yimid fariin xiligeeda laga soo gudbay qaabka loo qorayna xiiso badan laheyn. Director-ka reer Punjab Navaniat Singh shaqadiisa kowaad Bollywood-ka ma qurux badno madaama fariinta filimkan si wacan uusan isugu daba ridin ayadoo qoraalka sheekada liidatay haddana isagana qaabeyntiisa fariinta ma wacno waana sababta ugu weyn ee xiisaha ka qaaday filimkan.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka YPD Phir Se: Sunny Deol weli waa atoore door walbo ka baxsan karo waana shaqsiga ugu saameynta badan filimkan bandhig ahaan qaabka uu doorkiisa kaga baxsaday. Ruug cadaa Dharmendra inkastoo filimka oo wax badan socdo muuqaal ahaan doorkiisa sal dhiganaayo haddana si wacan ayuu u shaacireeyay wuuna ka baxsaday kaaliintiisa.
Bobby Deol isaga ayaa ugu muuqaal badan filimkan hadana isaga ayaa ugu liito sababtana waxay tahay doorkiisa inuu yahay midka ugu liito waayo jaceylka uu la wadaagayo Kriti Kharbanda ma ahan mid si qurux badan loo dhigay sidaa darteed muuqaalka Bobby wuu ku badan yahay laakiin si adag looma dhigin.
Kriti Kharbanda wey dadaashay inay shaashada sedexda Deol la qeebsato balse gabadhan door wacan kuma dhicin ileen filim sheekadiisa liidato cidna amaan gaar ah kuma heli karto.
Gunaanad: Filimka YPD Phir Se waxaa loo daawan karaa bandhiga Sunny iyo Dharam iyo xoogaa yar oo shactiro iyo Action ah balse sida guud waa fariin ku niyad jebineyso. Sidaa darteed taxanahan qaybtiisii kowaad ayaa ugu wanaagsan halka qaybta sedexaad wax yar fariin ahaan ka roon yahay qaybta labaad laakiin sida guud reer Deol ma ahayn inay qayb sedexaad ka sameeyaan filim qaybtiisii labaad siweyn sheeko ahaan u liidatay!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Yamla Pagla Deewana Phir Se:
Waxaa Aqrisay 1,349
Sxb jayam ravi filimkiisa TIK TIK TIK waxaan rabaa natiijada uu gaaray please sheekadiisa waala dhacay qatar waye